Soo bandhigida Cunnooyinka Taayirada Jikada Fursadaha - Cunnooyinka Lugaha
Soo Bandhigida Cunnooyinka Dufanka Jilibka ee Fursadaha
Judy ahaan kalkaaliye caafimaad oo diiwaangashan, waxay ogtahay qiimaha nafaqada wanaagsan marka ay timaado caafimaadka. Iyo sida qof ku qaata Cunto Wheels, iyaduna waxay qadarinaysaa cuntada caafimaadka leh ee waliba dhadhanka fiican leh.
Judy, oo ah 72 jir kuna nool Brooklyn Park, waxay u saxeexday Meals on Wheels qiyaastii hal sano ka hor markii xannuunada arthritis-ka iyo xanuunka daalka ee daba-dheeraaday ay ku adkaatay inay iyadu cunto karin nafaqo iyada u gaar ah. "Waxaan sii adkaynayay waqti aad u adag oo aan ku wareegayo," ayay tiri.
Judy waxay kaloo ogaatay inaysan awoodin inay ka baxdo guriga sidii ay ahaan jirtay waxayna u maleysay inay fiicnaan laheyd in la helo qof ay soo booqato inta lagu jiro saacadeeda qadada. "Dadka cuntada keena waa kuwo la yaab leh," ayay tiri. "Waxay dareemeysaa sida ugu fiican ee aan waligay nafteyda u qabtay."
Wixii aysan Judy ogeyn markii ay isqortay inay hesho cuntadu waxay ahayd inay ka mid noqon doonto kuwa ugu horreeya ee isku daya cuntada cusub ee ay diyaarisay Cunnada Jikada Fursadaha, jikada ugu horreysa ee loogu talagalay inay u adeegto Cunno-qaatayaasha Wheels dhammaan magaalooyinka Mataanaha ah . Cunnadeeda waxaa geeya Barnaamijka Kaaliyaha Degdegga ah ee Bulshada (CEAP), oo bilaabay inuu u adeego cunnooyinka ay soo saarto Cunnada Dufanka jikada ee Fursadaha bishii Maarso.
"Macaamiisha runtii way ku riyaaqayaan isbeddelada," ayuu yiri Madaxweynaha CEAP Clare Brumback. "Waxay jecel yihiin inay jiraan uunsi dheeraad ah ama walax dheeri ah oo cuntada ka dhigaysa mid aad u wanaagsan."
“Waxay ahayd wax fiican,” ayay tiri Judy. “Runtii waan jeclahay cuntada cusub. Xayawaanka hilibka digaagga ee Turkiga aad buu u fiican yahay kalluunkuna runtii wuu wanaagsan yahay. ”
Yoolalka Jikada Fursadaha
Ilaa waqtigan, barnaamijyada Twin Cities Meals on Wheels barnaamijyadooda waxay ka soo iibsadeen cunnadooda xirfadleyaal xirfadlayaal ah oo khibrad u leh soo saarista cunnada waayeelka. In kasta oo qaabkani u adeegay Metro Meals on Wheels iyo barnaamijyadiisa xubinta si wanaagsan, bilaabista Jikada Fursadaha ayaa soo bandhigtay fursado lagu kordhinayo tayada cuntada iyo in cunnooyinka laga dhigo kuwa ay aad ugu baahan yihiin.
"Keenida wax soosaarka cuntada ee guriga dhexdiisa iyadoo aan ka iibsaneynin kuwa wax cunaya maahan oo kaliya inay faa'iido ka hesho isla'egta qiimaha cuntada, laakiin waxay noo ogolaaneysaa inaan si weyn u xakameyno inaan siino cunno qaali ah kuwa aan heleyno," ayuu yiri Metro Meals on Wheels Executive Director Patrick Rowan. "Runtii waxay noo ogolaaneysaa inaan bixinno adeegga ugu fiican iyo tayada cuntada ugu fiican bulshada dhexdeeda."
Faa'iidooyinka laga filayo Cunnooyinka Cunnooyinka Magaalooyinka Mataanaha ah:
Kordhinta marin u helida kuwa u baahan. Maaddaama barnaamijyo badan oo maxalli ahi ay bilaabayaan inay u isticmaalaan Jikada Fursadaha cuntada, waxaan rajeyneynaa inay keydin doonto illaa $200,000 kharashka cuntada ee sannadlaha ah ee guud ahaan Cuntooyinka Gawaarida Deegaanka. Keydadka la soo saaray ayaa ka caawin doona barnaamijyada maxalliga ah inay u adeegaan dad badan oo aan u qalmin cunnooyinka ay dowladdu kabto, haddana u baahan cunno nafaqo leh oo ka caawisa inay si madax-bannaan u noolaadaan.
Cunto joogto ah, oo tayo leh. Open Arms of Minnesota, oo aan qandaraas kula galnay kormeerka wax soo saarka cuntada, waxay caan ku tahay soosaarida cunno dhadhan fiican leh oo nafaqo leh oo loogu talagalay dadka qaba cudurada nafta halista u ah. Iyada oo diirada la saarayo maaddooyinka cusub iyo cuntada laga soo bilaabo xoqidda markasta oo ay suurtagal tahay, Dadka qaata Cuntada Dufcadaha waxay rajeyneysaa inay nafaqeyso cunno dhadhan fiican leh
Dabacsanaanta buuxinta baahiyaha bulshada. Ku shaqeynta jikadayada noo gaarka ah waxay noo ogolaaneysaa inaan si aad ah uga jawaab celino dookha macmiilka maadaama aan si wada jir ah ugu shaqeyno u adeegida dadka waayeelka ah ee Magaalooyinka mataanaha ah ee la saadaalinayo inay sii laba jibaaraan sanadka 2040, iyadoo waliba si dhaqso leh u kala duwanaan doonta Keenida wax soosaarka cuntada hoostiisa hal saqaf ayaa kaa caawin doonta inaad siiso cuntada berri dadka waayeelka ah ee doonaya hab qiimo jaban leh.
"Waan ognahay inaan helayno tayada cuntada aan dooneyno kharashkuna wuxuu u wanaagsanaanayaa sida ugu macquulsan ee suurtagal ah," ayuu yiri Agaasimaha Hawlgallada Adeegyada Degdegga ah ee Bulshada Mike Krachmer, oo barnaamijkiisu u adeego Minneapolis.
Diirad saarid cusub oo caafimaad leh
"Waxaan runtii isku dayeynaa inaan fulino ballanqaadka in cunnadu ay dawo tahay," Alan Schelin, oo ah agaasimaha howlaha jikada ee Jikada Fursadaha.
Kris Almsted ayaa yidhi: "Waxaan ku darsanaynaa waxyaabaha ugufiican ee aan kari karno, waxaan u maleynayaa inay tahay wax aad u wanaagsan in dadka aan sida caadiga ah helin cuntada nafaqada leh ama aan si fiican wax u cuninba ay helaan cunto aad u fiican."
Waad ku mahadsantahay Jikada Fursadaha aasaasayaasha lamaanayaasha
Marka lagu daro Furitaanka Hubka ee Minnesota maaraynta wax soo saarka cuntada ee Jikada Fursadaha, hantida jikada waxaa iska leh Urban Ventures, oo boos ka kireysa Metro Meals on Wheels oo qiimo dhimis aad u qiimo badan leh. Nadiifiyeyaasha ganacsiga ee Jan-Pro waxay bixiyeen adeeg nadiifin kahor bilawga bilaashka. Furitaanka Jikada Fursadaha waxaa lagu suurta galiyay maalgalinta Walmart Foundation, General Mills Foundation, Meals on Wheels America, Ameriprise Foundation iyo Richard M. Shulze Foundation Foundation.
Juun 21, 2017